Gadra Nanjavona 48 Hita Tamim-pahadisoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2017 4:35 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Tokotanim-pasan'ny kaominina ny “Tokotanibe 29″ , ao amin'ny Fasana Faobe (ES) ao Santiago renivohitra. Tamin'ny taona 1991, gadra nanjavona miisa 124 nandritra ny fitondrana jadon'i Augusto Pinochet no hita ary fantatra ny 96 tamin'izy ireo. 20 taona taty aoriana, nanana fahafahana handevina ny havany tsirairay avy araka ny tokony izy ny fianakavian'ireo 96.
Ny herinandro lasa teo, 10 taona taty aoriana, fianakaviana 48 (tamin'ireo 96) no nampahafantarina fa nisy fahadisoana tamin'ny fizotran'ny famantarana ireo gadra. Nanoratra i Javier (ES) hoe “Fahavinirana sy Fahatezerana no tsapako, ary avy eo henatra. Mahamenatra ny miaina eto, izay nitrangan'izany zavatra izany. Mahafantatra ireo gadra nanjavona tamin'ny didy jadona fa mbola tsy hita indray izy ireo, saingy amin'ny demaokrasia. “
Tena mafy tamin'ny fianakavian'ireo gadra tsy hita ny dingana natao. Voalohany, satria mbola misy ireo gadra nanjavona mbola tsy hita ary ny hafa kosa tsy fantatra, ka miandry vaovao hatrany ny fianakaviana.
Nanoratra i Centros Chilenos (ES) hoe “… ary nitomany daholo ny fianakavian'ireo niharam-boina, ary nanonofy indray ary tsy mahatohitra ity fahavoazana nataon'ity governemanta ity ireo tafavoaka velona, manaisotra ireo olona velona ary ankehitriny mamerina azy ireo am-pahadisoana, .”
Miandraikitra ny fanamelohana ny mpampanoa lalàna iray ao amin'ny distrika. Iray amin'ireo olana teo ambany fanadihadiana ny antony mahatonga ny Servisin'Ivontoeram-Pahasalamana, (izay miandraikitra ny famantarana ireo gadra) tsy miraharaha ny vaovao manan-danja izay mety hanaitra azy ireo amin'ny fahadisoana mety misy. Nokaramain'ny Servisin'Ivontoeram-Pahasalamana ny manam-pahaizana iray avy ao amin'ny Oniversiten'i Glasgow tamin'ny taona 1991 mba hanampy amin'ny fizotran'ny famantarana ireo gadra, saingy tsy noraisin'ny manampahefana ny tatitra nataony tamin'ny taona 1994. Nanoratra i Shidi (ES) hoe “Ny Tokotanibe 29 misokatra, dia mampahatsiahy antsika fa tsy momba ny fiverenana izany… fa momba ny ratra naharitra ela vao sitrana ary tsy maintsy manaja ny fisaonan'ny firenena izay nanana olana handresena azy io isika. . “
Milaza ny fanehoan-kevitra nataon'ny mpanao gazety, Alberto Pretch nilaza hoe “ny tsy fampiasàna fepetra tamin'ny fampiroboroboana ity fisalasalana sy ratra lalina ity no zavatra mampihoronkoditra indrindra hitako nandritra ny 16 taona farany.”
Toa tsy misy vahaolana ireo ratra sasany na dia amin'ny demaokrasia aza. Ary tsy mampino fa ao anatin'ny tontolo izay misy teknolojia tsara kokoa sy milaza amintsika ny antony nahafatesan'ny Mpanjaka Tut, na renim-pianakaviana nopoizinina, tsy nampiasa ny marina ny fitondram-panjakana tamin'izany dingana izany.